Apple dia miasa amin'ny sensor mba handrefesana ny glucose amin'ny ra amin'ny alàlan'ny Apple Watch Series 8 | Vaovao IPhone
Apple dia miasa amin'ny sensor mba handrefesana ny glucose amin'ny ra amin'ny alàlan'ny Apple Watch Series 8
Nandritra ny taranaka maro dia nampitandrina sy nahita tamin'ny tsaho momba ny mety hahatongavan'ny a isika fomba tsy manafika handrefesana io haavon'ny glucose ao anaty ra io. Ny marina dia raha mieritreritra mangatsiaka isika ny mety ho dikan'ny fahatongavan'ilay sensor toy izany ao amin'ny Apple Watch miaraka amin'ny vidiny "mirary", dia tena mpivarotra lafo indrindra eran'izao tontolo izao isika.
Hatramin'ny namoahana ny iOS 15 dia afaka manao izany ny mpampiasa Apple ampio ity angona haavon'ny siramamy ity amin'ny fampiharana ara-pahasalamana miaraka amin'ny fitaovana ivelany. Raha mieritreritra fotoana fohy raha toa ka nahavita nandrefy faran'ity parameter ity ny famantaranandron'i Apple ary nitahiry ireo angona tao amin'ny iPhone dia azo antoka fa zavatra tena mahaliana.
Mazava izahay fa ireo karazan-sensor izay tsy mitaky fanindronana ary santionan'ny rà misy ankehitriny dia misy, fa matetika dia mandrara ny vidiny. Apple dia manana loharano sy vola ampy hiasa amin'ity karazana sensor ity ary hanitsy ny vidiny araka izay tratra mba hahafahan'ny rehetra miaritra diabeta mifehy tsara kokoa ny habetsaky ny siramamy ao anaty rany.
Rehefa mandeha ny fotoana dia mahazo isa ny Apple Watch amin'ny resaka fifehezana ny fahasalamana, afaka mieritreritra isika fa amin'ny fotoana iray dia ho tonga koa ity sensor ity ... MacRumors mamerina tatitra iray avy amin'ny Digitimes izy ireo, izay ahitan'ireo mpamatsy Apple fa mamorona fitaovana ahafahan'ny Apple Watch Series 8 mandrefy io masontsivana io. Misy resaka fohy sensor lava infrared, karazana sensor iray ampiasaina matetika amin'ny fitaovana ara-pahasalamana afaka mitondra an'io fiasa vaovao io.
Efa an-taonany maro izy ireo no niresaka momba ity karazana sensor ity ho an'ny famantaranandro Apple, Heverinao ve fa ho afaka handrefy glucose amin'ny ra ny taranaka ho avy amin'ny Apple Watch?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Apple dia miasa amin'ny sensor mba handrefesana ny glucose amin'ny ra amin'ny alàlan'ny Apple Watch Series 8
Vaovao farany! IOS 15.1, iPadOS 15.1 ary macOS Monterey no eto
Ireo ve no AirPods Pro andiany faharoa?